Jet Lag: Waa Maxay Iyo Sida Looga Caawiyo Jirkaaga Inuu Deg Deg Ula Wareego | Ragga Stylish
Weligaa miyaa inaad u duusho aag kale oo waqti ah, ha noqoto ganacsi ama raaxo? Kadib, shaki la'aan, waxaad soo martay cillad loo yaqaan Jet Lag.
Xamaasadda barashada waddan kale ama booqashada kuwa aad jeceshahay ayaa inta badan culeys la saaraa waxyeelo taxane ah oo loo yaqaan Jet Lag, taas oo, intaad safarto, ay u sii kacsan tahay isla markaana waarto.
1 Calaamadaha Jet Lag
2 Ma la dagaallami kartaa Jet Lag?
2.1 Duulimaadka kahor
Calaamadaha Jet Lag
Ugu horreyntii, waa muhiim in la fahmo sababta Jet Lag u muuqato. Weligaa ma maqashay in aan dhammaanteen leenahay saacad gudaha ah? Hagaag, waa gebi ahaanba run, iyo farsamadaas, oo sidoo kale loo yaqaan laxanka wareegga, waxay qaadataa waqti in lala qabsado aag waqti cusub leh. Intii aad wax hagaajinaysay, jidhku shaqadiisii ​​wuu u joogsanayaa, Shaqooyin badan oo jidhku waxay ku xidhan yihiin saacadda gudaheeda, laga bilaabo soosaarka hoormoonka illaa hirarka maskaxda.
Xaaladaha diyaaraduhu si sax ah ugama caawinayaan inay yimaadaan meeshii loogu talagalay iyagoo cusub oo diyaar u ah caqabad kasta.. Cadaadisku wuxuu yareeyaa oksijiinta dhiigga wuxuuna u horseedi karaa fuuqbax, halka dhaqdhaqaaqa liita uu sidoo kale gacan ka geysto sii xumeynta astaamaha jet daah.
Haddii aad si joogto ah u duusho, calaamadaha Jet Lag ayaa kugu noqon doona mid aad u yaqaan, inkasta oo ayan uga roonayn taas. Beddelka aaga waqtiga ayaa sababi kara:
Xoog saarista adag
Laakiin ha ka welwelin, sida, sidaad horeba u ogayd, Jet Lag inay tahay mid ku meel gaar ah. Jirka bani’aadamku waa mashiin garaadkiisu sarreeyo oo wuxuu ku dhammaadaa inuu la qabsado isbeddelka waqtiga ugu degdegga badan. Dabcan, waa lagama maarmaan in waqti la siiyo oo loo naxariisto, wax aan sharrax ka bixin doonno sida hadhow loo sameeyo. Laakiin intee in le'eg ayay qaadanaysaa in astaamuhu baaba'aan? Waxay qaadan kartaa 24 saacadood ilaa usbuuc in jidhku ku soo noqdo caadi. Waxay kuxirantahay masaafada loo safray iyo da'da (dadka waayeelka ah waqti dheer ayey ku qaadanayaan soo kabashadooda).
Ma la dagaallami kartaa Jet Lag?
Wax ma laga qaban karaa si loola dagaallamo Jet Lag? Halkan waxaan uga jawaabeynaa tan iyo su'aalaha kale ee xiisaha leh ee kaa caawin kara inaad si fiican ula qabsato astaamahaaga, oo xitaa aad u yareysid.
Nasiib darrose, ma jiro daaweyn mucjiso ah oo lagu baabi'iyo Jet Lag, laakiin waa inaad sugto saacaddaada gudaha si aad ula jaanqaadi karto midka dibadda. Si kastaba ha noqotee, haa taasi waxaad sameyn kartaa waxyaabo aad ufudud oo wax ku ool ah oo kaa caawinaya saacaddaada gudaha inay si dhakhso leh ula qabsato xaaladda cusub.
Istaraatiijiyad wanaagsan oo anti-Jet Lag ah waa inay bilaabataa dhowr maalmood ka hor intaadan safrin transoceanic. Haddii aad suurogal tahay si tartiib tartiib ah u beddela jadwalkaaga hurdada si aad ugu haboonaato aaga waqtiga aad u socoto ayaa wax badan kaa caawin kara. Waa wax aad u fudud: inaad sariirtaada kor u qaaddo ama hoos u dhig 30 daqiiqo maalin kasta.
Sameynta isla cuntada, ku hormarinta ama dib u dhigida iyadoo kuxiran waxa aagaaga cusub uu noqon doono, sidoo kale waxay kaa caawineysaa inaad kadhigto jug jilicsan. Laakiin wax walba ka sarreeya, hubi in cuntadaadu ku siiso nafaqooyin badan, maadaama jirkaaga uu ku qanci doono inta lagu jiro Jet Lag. Ilaa iyo inta laga hadlayo cuntada, sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad yareyso isticmaalka aalkolada iyo kafeega maalmo kahor iyo kadib safarka, maadaama ay faragalin ku hayaan hurdada.
Ugu dambeyntii marka aad diyaarada dhex fadhido ka dhig saacadahaaga inay calaamadeeyaan waqtiga wadanka aad u socoto. Cilmu-nafsiga waa mid awood badan ficilkan yarna waa cadeeynayaa. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u fikirto sidii aad ugu jirtay aaga waqtiga cusub, si dhakhso leh ayaad uga soo kaban doontaa Jet Lag, iyo saacadaha shaki la'aan waxay kaa caawin doonaan inaad maskaxda ku hayso. Laakiin taxaddar, tani waa muhiim: waligaa ha sameyn kahor intaadan diyaaradda fuulin ama duulimaadka waad tabaysaa.
Hambalyo, waad gaadhay meeshii aad u socotay. Hadda waxay ku saabsan tahay inaad u naxariisatid jirkaaga. Sidee? Waa hagaag in la bilaabo hubi inaad cabto biyo kugu filan oo aad seexato waqti gaaban haddii aad daal badan dareento (2 saacadood ugu badnaan).
Helitaanka hurdo fiican habeenkii waa furaha. Haddii kale, waqtiga soo kabashada waa la kordhin doonaa si aan xad lahayn, wax aan ku habboonayn gabi ahaanba. Si kastaba ha noqotee, markay tahay waqtiga sariirta, Jet Lag waxay kugu adkeyneysaa inaad hurudo. Laakiin ha ka welwelin, haddii taasi kugu dhacdo, waxaad ku qaadan kartaa faleebooyin nasasho ah inta lagu jiro habeennada ugu horreeya meesha aad u socoto. Iyo melatonin ayaa sidoo kale ku caawin kara adiga.
Iftiinka qoraxda wuxuu door aad u muhiim ah ka ciyaaraa saacadaada gudaha, isagoo doorbidaya shaqadiisa saxda ah, sidaas Banaanka u bax in lagu maydho falaadhaha qorraxda, haddii ay suurogal tahay subaxdii. Xoogaa jimicsi samee ama lugee socod.
Gooni isu taagga marna fikrad fiican maahan, gaar ahaan xaaladaha jirkaaga iyo maskaxdaadu aysan sida ugu fiican ku jirin. Marka bulsho noqo, naftaada mashquul. Dadku hareerahaaga ayaa kaa caawin doona inaad si dhakhso leh uga adkaato Jet Lag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Daalka diyaaradda